Macalimiinta Machadka Al Dacwa Oo Loo Furay Kulan Lagaga Hadlayay Sidii Ay Ardayda Uga Wacyi-Galin Lahaayeen Qabyaaladda.
(Hadhwanaagnews) Thursday, November 29, 2018 17:13:55
Munaasibada ayaa waxa ka soo qayb-galay maamulka,Macalimiinta Al Dacwa Iyo Marti sharaf kale
Hargaysa(HWN)Machadka Al Dacwa Ee Barashadda Shareecadda Islaamka iyo Luuqadda carabiga ayaa Maanta Magaaladda Hargaysa Macalimiinta Wax ka dhiga uga furay kulan lagaga hadlayo sida ay ardayda ay barayaan Cilmiyadda Kala Duwan Ee Xaga Diinta Ah Uga Wacyi-Galin lahayeen in ay ka dheeradaan Qabyaaladda Iyo faafinteeda.
Munaasibada ayaa waxa ka soo qayb-galay maamulka,Macalimiinta Al Dacwa Iyo Marti sharaf kale,waxaana ujeedada kulankani ahaa sidii macalimiintu ay uga qayb qaadan lahayeen dadaalka loogu jiro cidhib tirka qabyaaladda.
Kulankan macalimiinta lagu barayo sida ay ardayda qaab cilmiyaysan ugu sheegi lahayeen dhibta ay leedahay
qabyaaladdu ayaa socon doona mudo laba cisho ah kuwaas oo macalimiinta loogu tallo galay in ay Ka Faa’idaystaan.
Ugu Horayn waxa kulankan Furay Maamulka Macadka Al Dacwa Sheekh Cabdiraxmaan Cumar Cigaal waxaana uu ka waramay tababarkan ay bixinayaan sheekhyo ku xeel dheer sida bulshadda looga saari karo qabyaaladda iyo sida ay lama huraanka u tahay doorka ay macalimiintu ku yeelan karaan.
“Kulankan aynu maanta halkan iskugu nimid Machadka Al Dacwa Dhexdiisa waxa uu daaran yahay casharo ku saabsan sida bulshadda looga saari karo qabyaaladda,madaama oo aynu inagu nahay macalimiintii soo saaraysay ardayda waa in aynu doorkeena qaadanaa si looga baxo qabyaaladda isla markaasina aynu noqon dad ka xor ah qabyaaladda,kolay ardayga halkan inoogu imanaya waxa loo baahan yahay in aynu ku tarbiyadayno sunda rasuulka una bandhigno sida ay markasta u xun tahay qabyaaladu.
Intaas waxa uu ku daray maamulaha machadka Al Dacwa Sheek Cabdiraxmaan Cumar Cigaal.”kulankani waxa uu inoo socon doonaa mudo laba cisho ah waxaana laydinka doonayaa inaad ka qaadataan door muuqda oo ku saabsan sida bulshadda qabyaaladda looga cidhib tiri karo,kolay macalinku waxa ku waajib ah inuu markasta ka shaqeeyo isku soo dhawaan-shaha bulshada iyo sida uu ardaydiisa uga nadiifin lahaa qabyaaladda.
Sheekh Axmed Cabdi Salaan Iyo Cabdirashiid Baaxeen Ayaa si wada jira waxa ay ugu dheeraadeen dhibta ay leedahay qabyaaladu sida loogu baahan yahay in ay macalimiintu ka qataan door muuqda oo ardayda ay barayaan cilmiga diiniga ahna tusaan sida looga bixi karo qabyaalad.
“qabyaaladdu waa cudur soo jireen ah, wakhti dheerna hayay qoomiyadda Soomaaliyeed. Haddii aanu nahay ummad Islaam ah, waxa wanaagsan inaanu ku dhaqano waxa ay nafarayso diinteena islaamku,waa In bulshada qabyaaladda laga wacay geliyo waxa muhiim u ah bulshada inay si fiican u fahmaan dhibaatada ay gaysatay qabyaaladu,waxa macalinkana looga baahan yahay inuu isna door muuqdo ka qaato sida qabyaaladda looga bixi karo oo ardayga ama ardayadda uu wax u dhigao tuso sida looga bixi karo qabyaaladda iyo waliba dhibta ay ku dhex leedahay bulshadda somaliland.Sidaas ayaa uu yidhi Sheekh Axmed Cabdi Salaan Isaga oo macalimiinta kula dardaarmaya in ay iyagu yihii kuwa bulshadda badali kara.
“Meelaha waxbarashada waa goobaha ugu muhiimsan in wacaygelinta lagu bilaabo. Bulshada guud ahaanteeda waxay u baahantahay wacay gelin. Waxaana wanaagsan in la helo qof ku fiican in fikirkiisa iyo aragtida uu sido dadka ku shubi karo. Qabyaaladda waxaan is dhihi karaa waa waxyaabaha hortaagan in bulshadu midawdo, Ummaddanu waxay ku soo jirtay dhibaatooyin,lakiin maanta waxa lagaga bixi karaan bulshadda oo isku tagta iskuna raacda midnimow iyo in qabyaaladda laga tago….sidaas ayaa uu yidhi Sheekh Cabdirashiid Baaxeen oo qabyaaladda ka hadlayay.
Maamulka Machadka Al Dacwa Ee Barashadda culuumta diiniga ah iyo luuqada carabiga ayaa isku hawlay in ay macalimiinta wax bara Da’yarta somaliland sidii ay ugu keeni lahaayeen sheekhyo khuburo ah oo ku xeel dheer sida bulshadda looga saari karo qabyaaladda,waxaana ay culimadani tilmaameen in halka koobaad ee qabyaaladda dhibteeda bulshadda u sheegi kartaa ay yihiin macalimiinta madaama oo ardaydu ay dhigtaan dugsiyadda.